トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Aura okubaluleke senzakalo ukuhlangabezana twin Seoul
▼ (ezihambayo at ngokuchofoza) leli khasi le ndima
iyona aura elihlangabezana umphefumulo angamawele? Ukuze Okusizayo bakhangwa e umphefumulo kokukhipha
umqondo fixed lula ukuze ugoqe ubuhlobo ziyaqothuka nge
Twin Soul baba omunye umuntu bangempela [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze izangoma ka ukuthola indlela
kudala ihlukaniswe umphefumulo, ngempela ukuphila njalo kuleli zwe futhi imvelo eduze efanayo akukho. Kungenzeka ukuhlangabezana umphefumulo twin neze okusezingeni eliphezulu, kodwa ingaba ukuthi ukuze kuhlangabezanwe ukuhlangabezana. Lapho ehlangana
umphefumulo ayiwele naye, kukhona ifakiwe incazelo. It is, kuze kube manje ukuzazisa etholwe abaphilayo babe nokuphila futhi engaguqukiyo, naye wayibona amanxeba wahlupheka ekuphileni kwangaphambili, kuyinto kukhanyise. Lezi zinto ngeke ukuvimbela Fusion imiphefumulo emibili. Ngenxa yalokho, nathi kuleli zwe kukhona akukwazi kunjalo Fusion.
twin Seoul ukuba Fusion, uzodinga nomunye ukuheha nomunye ezingeni umphefumulo. Ungaqondi, ukuthola umqondo wenjabulo engaphezu kwamandla akho, zikhishwa kulezo wabanjwa ngokwami ??ngokususa umqondo engenamsebenzi, kungcono kubalulekile ukubamba amandla nomunye ezingeni eliphezulu. Ezinye aura ukuhlangabezana
umphefumulo angamawele? Lapho ehlangana
twin Seoul, ke kuthiwa i sokuhle ezinjalo.
? lover noma umngane osondelene nesehlukaniso iminyaka eminingi
ukujola ukuba lover nomngani engcono, uma isehlukaniso ezibalulekile zomkhaya futhi ngandlela-thile, ungase uthande ukunambitha imizwa sasivumela buhlungu ekuphileni kwami. Ngale ndlela nihlukana, ezifana shaking ukuphila, bekulokhu draw ukuhlangana isiphetho umphefumulo abangamawele.
? ulahlekelwa yini kwaba uthando
ezifana, isibonelo, esakwazi ukuqhubeka ulahlekelwe umsebenzi kuke kwaba nzima ukuzizwa iphileke, futhi umdlalo okwakukade Wawufaka lo olimele ukusebenza, ezinkulu uma kukhona umcimbi nomuzwa wokulahlekelwa, ungase Twin Seoul livela phambi iso njengoba kukhona abayokusekela kuye. Sama emngceleni wama
? ukuphila nokufa Ukuhlengwa
ingozi kakhulu noma ukugula lapho ngenxa, ngisho noma lokho okwenzeka ezulazulayo ngokusebenzisa omunye ukuphila umngcele noma ukufa, ingenye aura elihlangabezana umphefumulo abangamawele. Lapho isimo esiphuthumayo ukuthi umphefumulo kuzonyamalala kule ezweni, kuyothiwa futhi ubhekwe njengethuluzi another phefumulo ungaphakathi ekhonsathini.
twin umphefumulo zimpi ukuze
eyeqisayo Okusizayo bakhangwa e umphefumulo isuswe ikani, kubalulekile ukususa umqondo zanqwabelana fixed naleli zwe lokho okuye ethwele ekuphileni kwangaphambili. I lapho lesi sigameko esibuhlungu ekuphileni kuyisandulela ukuhlangabezana Seoul ayiwele naye, ukuze sixoshe umbono onjalo nokuklwebheka, kungase uvuse we for ukuhlala kuyo izinsalela umphefumulo.
twin Seoul futhi inqubo fusing akuyona kuphela neze bajabule, iza sizi olukhulu. Nokho, endaweni yokuqala omunye umphefumulo ihlukaniswe ezimbili, ngoba iwukufunda unqobe yizinselelo, lithi buhlungu futhi kuyadingeka ukuze umphefumulo futhi ibuyisela komunye.